‘डर काहे नही लागथ है’ |
‘डर काहे नही लागथ है’
कथित बोक्सीको नाममा मलमुत्र खुवाएर निर्घात कुटिएकी राजकुमारीको मनबाट डर हट्न सकेन
प्रकाशित मिति :2015-11-03 11:30:19
कैलाली, कात्तिक १७ । कैलाली वेलादेविपुर गाविस (हालको अत्तरिया नगरपालिका ३) की राजकुमारी रानालाई अहिले समाजमा निर्वाध बस्न समस्या छैन् । तर, उनलाई विगतले झस्काईरहन्छ । उनको मनबाट डर अझै हटेको छैन् । उनलाई फेरी आफूमाथि पहिलेको व्यवहार दोहोरिने हो कि ? भन्ने डर लागिरहन्छ ।
कथित बोक्सीको आरोपमा स्थानीयले मलमुत्र खुवाएर निर्घात कुटपिट गरिएकी पीडित महिला हुन् राजकुमारी । उनी बोक्सीको आरोपमा २०६९ साल चैत्र २३ गते क्रुर यातनाको सिकार बनेकी थिइन् । त्यही घटनाले गर्दा उनी समाजमा सहज घुलमिल हुन डराउँछिन् । यद्यपी समाजले आफूमाथि गर्ने व्यवहार पहिलेको भन्दा निकै परिवर्तन भएको उनले बताइन् । पहिलेको भन्दा म र मेरो परिवारलाई गर्ने व्यहारमा निकै सुधार भएको छ’ राजकुमारीले भनिन् ‘आजकाल विभिन्न काममा सहयोग आदानप्रदान पनि हुने गर्छ ।’
अन्धविश्वासको कारणले आफूमाथि बोक्सीको आरोप लाग्दै आएको उनले बताइन् । लामो समयदेखि रानालाई समुदायले बोक्सी भन्दै उनीमाथि दुर्व्यवहार गर्दै आएपनि तीन वर्षअघि उनीमाथि भएको घटनापछि भने कसैले मानसिक र भौतिक यातना नदिएको उनले बताइन् ।
‘अगुल्टाले हानेको कुकुर विजुली चम्कदा तर्सन्छ’ भनेझैं आफूमाथि भएको निर्मम यातनाले राजकुमारीलाई सहज भने तुल्याउन सकेको छैन् । उनलाई अहिले कसैले बोक्सी भनेर अपमान नगरेपनि मनभित्रैको डरले जरा गाडेको छ । ‘डर लागथ हे,काहेँ नलागेथ ? फिर चुट्न लागथ हे यही डर लागथे हे’ उनले भनिन् ।
राजकुमारीको लागि २०६९ सालको घटना जीवनकै भयानक थियो । यसअघि पनि पटकपटक बोक्सीको आरोप खेप्दै आएकी उनले २०६७ सालमा पनि पीडा भोगेकी थिइन् तर, त्यसबेला भौतिक आक्रमण भने नभएको उनको भनाइ छ । आमामाथि पटकपटक दुर्व्यवहार भइरहे पनि समाजको डरले प्रहरीसमक्ष न्यायको लागि नपुगेको राजकुमारीका छोरा दल बहादुर रानाले बताए । हाल समाजले बोक्सी हुँदैन यो अन्धविश्वास मात्रै भएको भन्ने बुझिसकेकाले आफ्नो परिवारप्रतिको नकारात्मक सोच हटेको छोरा दल बहादुरले बताए ।
आफुलाई सोही रुखमा यसरी बाँधेर कुटेको भनी देखाउँदै राजकुमारी राना
बोक्सीको आरोपमा भोगेको याताना र कुटपिटबाट राजकुमारीको आँखा, खुट्टा, गप्ताङ्गलगायत शरिरका विभिन्न अंगमा चोट पुगेको छ । त्यही कुटपिटको कारणले आँखा नदेख्ने र खुट्टा अशक्त हुँदा हिडडुल गर्न समस्या देखिएको उनी बताउँछिन् । ‘न संसारमा देखुहुँ, ना सुनुहुँ, सब मेरो शरीरमा नै वितोहो’ उनले भनिन् ‘उती बेलाको कुटाइका कारण मै आँखा नदेखु हुँ ।’
आफ्नो छोरा खेर गएको भन्दै स्थानीय धनसिंह राना, रामसिंह राना, मिरा राना, र रामकुमारीले राजकुमारीलाई बोक्सीको आरोप लगाउँदै उनीमाथि अमानविय व्यवहार गर्दै यातना दिएका थिए । विहान सुतिरहेकी राजकुमारीको घरमा प्रवेश गरी उनलाई निर्घात कुटपिट, केस मुण्डन समेत गरी कालोमोसो दलेका थिए । गुप्ताङ्गमा काठ घोचेर यातना दिइएको थियो ।
कथित बोक्सीको आरोप लगाई कुटपिट गर्दा दात झरेको देखाउँदै ।
घटना लगत्तै पीडकलाई कानुनी कठ्घरामा ल्याएर राजकुमारीलाई उपचार गरिएको थियो । उपचारपछि उनी हाल सोही समाजमा स्थापित हुन थालेकी छिन् । उनलाई यातना दिने पीडक मध्ये मिरा र रामकुमारी एक वर्षको जेल सजाय भुक्तान गरि घर फर्किएका छन् भने धनसिंह र रामसिंह राना भने अझै फरार छन् ।
प्रकाशित मिति २०७२ कात्तिक १७ गते मंगलवार